चीनको प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गर्न सफल होला भारत ?
काठमाडौं, ३ जेठ – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै गरेको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्धमा मिठास आउला त ? यो प्रश्न अहिले जल्दोबल्दो छ ।
मोदीको यात्रा धार्मिक थियो भन्ने चर्चा सुनियो । तर नेपालका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेका अनुसार, यो यात्रामार्फत मोदीले आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गरे र दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने कोशिश पनि गरे ।
घिमिरे भन्छन्, ‘नेपालमा तीन वर्षपहिले लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीपछि मोदीप्रति यहाँ धेरै निराशा थियो । यो भ्रमणले उनको व्यक्तिगत छविलाई अलिकति उजिल्याएको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘मोदी सरकारका कारण भारतले दक्षिण एसियाका छिमेकी देशसमक्ष आफ्नो हैसियत गुमाएको र ती देश चीननजिक पुगेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । मोदीको भ्रमण पनि नेपाललाई कसरी फेरि भारतनजिक ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।’
नेपालसँग भारतको सम्बन्ध यति खराब कसरी भयो ? भारतीय प्रधानमन्त्रीले किन बारम्बार भारत र नेपालको पुरानो तथा ऐतिहासिक सम्बन्धको याद दिलाइरहनुप–यो ?
नेपालको राजनीतिका बारेमा जानकारी राख्ने आनन्दस्वरूप बर्मा यसका लागि भारतले गरेको केही गल्ती जिम्मेवार रहेको मान्छन् ।
वर्मा भन्छन्, ‘नेपाल तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएको छ । भूपरिवेष्ठित भनेजस्तै नेपाल भारतपरिवेष्ठित छ । एकतिर चीन छ तर चीनतर्फ अप्ठ्यारा पहाड छन् र मौसमले पनि नेपाललाई चीनमाथि निर्भर हुन दिँदैन ।’
‘अब तीनतिरबाट नाकाबन्दी गरिएपछि नेपालले चीनतर्फ हेर्ने नै भयो । नाकाबन्दी लगाइएको २० दिनपछि नेपालले पेट्रोलका लागि चीनतर्फ हात बढाएको थियो । त्यतिखेर नेपालमा ओली सरकारप्रमुख थिए अनि अहिले पनि उनी नै
प्रम छन् । जाडोको समयमा उनले चीनसँग सहयोग नमागेको भए जनता भोकै मर्नुपर्थ्यो । चीनका लागि राम्रो अवसर थियो र उसले बेस्सरी सहायता ग–यो । अहिले पनि चीनले मद्दत गरिरहेको छ ।’
घिमिरे पनि आर्थिक नाकाबन्दीपछि नेपालले यस्तै स्थिति आएमा अर्को विकल्प खुला राख्नुपर्ने सोच राख्न थालेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘नाकाबन्दीपछि नेपालले व्यापार तथा पारवहनका लागि भारतमा मात्र भर पर्नु मुश्किल हुने थाहा पायो । चीनसँग पनि व्यापार र पारवहन बढाउनुपर्ने अनि मात्र नाकाबन्दीको स्थितिमा वैकल्पिक मार्ग खुल्ने नेपालले
बुझ्यो । नेपाली जनता यसबाट खुशी छन् र उसले ओली सरकार वा अन्य कुनै सरकारलाई यो मुद्दामा समर्थन गरेको छ ।’
मोदीले भारतको छिमेकी पहिले नीतिमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताउने गरेका छन् । भारतले यो नीतिको चर्चा पहिलेदेखि नै गरिरहेको हो तैपनि छिमेकी देशसँग उसको सम्बन्ध किन बिग्रियो ? आनन्दस्वरूप वर्माका अनुसार,
भारतका शासकहरूको औपनिवेशिक मानसिकताका कारण नै छिमेकीहरूसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छैन ।
उनी भन्छन्, ‘छिमेकी नीति राजीव गान्धीको समयमा पनि थियो । भारतले नेपालमा मात्र नभई अन्य छिमेकी मुलुकलाई पनि उनीहरू भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा साना भएकाले आफ्नो स्याटेलाइट कन्ट्री मान्छ । यसैले गर्दा
छिमेकका कुनै पनि देशसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन ।’
भारतले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको नेपालको चिन्ता हो ।
युवराज घिमिरे भन्छन्, ‘नेपालमा गरीबी होला, पछौटेपन होला, अशिक्षा होला तर ऊ स्वतन्त्र रहेको अनि कसैको उपनिवेश नबनेको कुरामा गर्व गर्छ । कसैले उसको सम्प्रभुतालाई चुनौती दिँदा ऊ आक्रोशित हुन्छ । सन् २००६ पछि
भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेरै हस्तक्षेप गरेको नेपालमा धारणा छ ।’
भारतले नेपालको विश्वास कसरी जित्न सक्छ त ? पत्रकार आनन्दस्वरूप वर्माका अनुसार, यसका लागि छिमेकी देशको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नु जरूरी छ ।
उनी भन्छन्, ‘भारतले अरू केही नगरेपनि कम्तीमा नेपाली जनताप्रति सम्मान देखाओस् । नेपाल र भारतबीचका सबै चेकपोस्टमा नेपालीहरू अपमानित नहुने व्यवस्था बन्नुपर्छ । भारत आउने वा भारतबाट फर्किने शिक्षित
नेपालीहरूलाई पनि प्रहरीले अपमान गर्छन्, जुन उनीहरू सहन सक्दैनन् ।’
चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै जाँदा भारतले चिन्ता गर्नुपर्ला भनी सोधिएको प्रश्नमा वर्मा भन्छन्, ‘चीनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिका उसको प्रतिद्वन्द्वी हो । भारत अमेरिकाको जुनियर पार्टनर
भएकोमा चाहिँ चीनले चित्त बुझाएको छैन । नेपाल चीनतर्फ मोडियो भने यो भारतको नेपालनीतिको विफलताको प्रमाण हो ।’
जानकारहरूका अनुसार, भारतले छिमेकी देशको विश्वास जित्नका लागि आफूले गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई स्वतन्त्र र सम्प्रभु शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित आदर्श राठौरको रिपोर्टको भावानुवाद
संवैधानिक परिषद्‍को सिफारिस- वित्त आयोग प्रमुखमा बालानन्द, समावेशीमा शान्तराज
कांग्रेसका पूर्वसभापति नेकपामा प्रवेश, ओली र प्रचण्डले गरे स्वागत
भारतीय नेताहरूसँग भेटपछि विश्वदीपले भने- नेपालसँग राजनीतिक तहमै सम्बन्ध बढाउन चाहेका छन्
मधेश आन्दोलको १२ वर्ष– शहीद परिवारसँग मागिन्छ ‘बलिदान’को प्रमाण, जागिरको सट्टा ‘डेमो’ नियुक्तिपत्र !